Messi iyo Suarez oo dacwad ka dhan ah Dembele u gudbiyay tababare Valverde! – Gool FM
Messi iyo Suarez oo dacwad ka dhan ah Dembele u gudbiyay tababare Valverde!
Liibaan Fantastic July 7, 2018
(Barcelona) 07 Luulyo 2018 Xiddigaha kooxda Barcelona ee kala ah Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa dacwad ka dhan ah Ousmane Dembele u gudbiyay tababare Valverde.
Express ayaa daaha ka qaaday in weerar yahanada Barcelona aysan la dhacsanayn qaab ciyaareedka laacibka reer France ee xiliciyaareedkii hore, waxayna dalbadeen laacib orod badan oo ka ciyaari kara garabka midig.
Messi iyo Suarez ayaa u sheegay tababare Valverde in Barcelona ay ka liidatay dhanka garabka midig xiliciyaareedkii hore kadib hoos u dhac ku yimid Dembele iyo waliba dhaawiciisa oo badnaa.
Waxayna waydiisteen in la keeno laacib orod badan, oo ganbis badan isla markaana awooda inuu kubadda la soo galo qadka dhexe si ay uga faa’idaystaan, laacibkaas ayaana loo arkaa inuu yahay Willian.
Barcelona oo fulinaysa dalabka Messi iyo Suarez ayaa 50 milyan oo Ginni ku dalbatay Willian, balse waa laga soo diiday, waxaana suurogal ah in kooxdu ay markale ku celiso dalab kale maadaama laacibku uu ka soo haray koobka adduunka.
Manchester United ayaa dhankeeda ku dadaalaysa dhamaystirka saxiixa Willian, tababarihiisii hore ee Mourinho ayaana doonaya inuu markale ka hoos ciyaaro.
SAWIRRO XUL AH: U diyaar garowga taageerayaasha England iyo Sweden ee kulanka galabta
Cristiano Ronaldo oo la xiriiray Carlo Ancelotti si uu wax uga ogaado ....!